China Tilapia Fish Collagen Peptide ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Huayan
Na mgbakwunye na akụrụngwa mbụ, kachasị akụrụngwa na teknụzụ dị elu, ụlọ ọrụ ahụ na-agbakwunye njikwa na njikwa dị mkpa maka usoro mmepụta niile, ma na-agbasi mbọ ike inweta ihe kachasị mma na njikọ niile iji hụ ogo ngwaahịa ikpeazụ.
Azụ collagen peptide, a na-achịkwa collagen n'okpuru ihe omimi 1000-3000 Dalton site na acid-base na usoro mgbaze enzyme. Ọ na-akpọ obere molekul peptide. Peptide bụ ihe dị n’etiti amino acid na protein protein nke micro-molecule. Otutu peptides bu irighiri akuku iji mebe molekul protein. Peptides bụ iberibe protein. Ngwurugwu ya bụ nanometer naanị nha. Gastrointestine, arịa ọbara na anụ dị mfe ịnabata, ọnụọgụ nke ọ na-amịkọrọ ihe karịrị nke ndị na-edozi macromolecule.
Isi Iyi: Tilapia akpụkpọ ma ọ bụ akpịrịkpa tilapia
Mkpụrụ igwe: 1000-3000DA, 500-1000DA, 300-500DA.
Steeti: ntụ ntụ, granule
Agba: White ma ọ bụ ìhè edo edo; azịza ya enweghị ntụ ma ọ bụ odo odo
Ire na isi: Site na uto na isi isi puru iche.
Molekụla Arọ: 1000-3000Dal, 500-1000Dal, 300-500Dal
Atụmatụ: protein dị elu, enweghị mgbakwunye ， na-enweghị mmetọ
(1) Collagen nwere ike ichebe akpụkpọ ahụ, mee ka anụ ahụ na-agbanwe;
(2) Collagen nwere ike ichebe anya, mee cornea transperent;
(3) Collagen nwere ike ime ka ọkpụkpụ sie ike ma na-agbanwe agbanwe, ọ bụghị nke na-emebi emebi;
(4) Collagen nwere ike ịkwalite njikọ sel muscle ime ka ọ na-agbanwe ma na-egbuke egbuke;
(5) Collagen nwere ike ichebe ma wusi viscera;
(6) Collagen nwekwara ọrụ ndị ọzọ dị mkpa: Meziwanye mgbochi, igbochi mkpụrụ ndụ kansa, na-arụ ọrụ mkpụrụ ndụ, homeostasis, rụọ ọrụ akwara, na-emeso ogbu na nkwonkwo na mgbu, gbochie ịka nká nke anụ ahụ, wepụ nsị.
(1) Cchọ mma nwekwara ya obere molekụla arọ, na-amịkọrọ mfe. Nwere otutu ndi hydrophilic di iche iche, ihe di nma nke mmiri ma na edozi iru mmiri nke akpukpo aru, nyere aka maka iwepu agba gburugburu anya na otutu, mee ka aru di ocha na mmiri, izu ike na ihe ndi ozo.
(2) Enwere ike iji kọlọji dị ka nri dị mma; ọ nwere ike igbochi ọrịa obi;
(3) Collagen nwere ike ịbụ nri calcium;
(4) Enwere ike iji collagen mee ihe dị ka ihe mgbakwunye nri;
(5) Enwere ike iji kọlọji mee ihe na nri oyi, ihe ọ beụveraụ, ngwaahịa mmiri ara ehi, swiiti, achịcha na ihe ndị ọzọ.
Nke gara aga: Mmiri Azụ Oligopeptide
Osote: Oporo Peptide